गुगल एनालिटिक्सबाट रूसी रेफरल स्पामको रोकावटमा Semalt विशेषज्ञ
स्पामर्सले निरन्तर नयाँ प्रकारका स्प्यामहरू विकास गर्दैछ जुन Google एनालिटिक्समा हमला गर्दछ। हाल, त्यहाँ रूसबाट स्पाम वेयरको आगमन भएको छ स्पामकर्ताहरूले स्प्याम विकास गर्न आफ्नो समय लिनेको साथ ट्राफिक भेला हुनेछ। त्यहाँ स्प्यामका चार मुख्य प्रकारहरू छन्: एनालिटिक्स, क्रोलर, लेजिट बट्स र स्पाम स्पाम।
Semalt , अलेक्ज्याण्डर पेरेसुन्कोको अग्रणी विशेषज्ञद्वारा प्रदान गरिएको बाध्यकारी मुद्दाहरूको लागि तल झर्नुहोस्, र रेफरल स्पामबाट सुरक्षित रहनुहोस्।
तिनीहरू भूत रेफरलको रूपमा पनि चिनिन्छन्। यद्यपि तिनीहरू साइट भ्रमण गर्दैनन्, तिनीहरू विश्लेषकमा देखिएका छन् गुगल एनालाइटिक्स आईडी स्प्याम गर्ने बेलामा। स्प्यामिंग अनियमित तरीकाले लिन्छ र कम्प्युटर प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको रेफरल साइटहरू खोल्नको लागि छल गर्ने उद्देश्य राख्दछ। तिनीहरू प्रायः रूसी मूलका हुन्।
यी स्प्यामहरूको प्रकार हो जुन इन्टरनेटमा जानकारी संकलन गर्ने जानकारीमा तिनीहरूको क्रिलिंग प्रकृतिले देखाउँदछ। उनीहरूलाई भेट्नबाट जोगिन सल्लाह दिइन्छ किनकि उनीहरूको भाइरस खतराका कारण तिनीहरूलाई ब्लक गरिनु पर्दछ। क्रलर स्प्यामको उदाहरण बटन-वेबसाइट स्प्यामको लागि हो।
यद्यपि कान्ट अटहरू सामान्य रूपमा एनालिटिक्समा देखिँदैन, ती कहिलेकाँही खोज ईन्जिनमा देखाउन बोलीको वरिपरि माकुरो।
यी स्पाम वास्तवमै कसैको वेबसाइटमा जाँदैन तर तिनीहरूको लक्षहरूलाई स्प्याम गर्ने प्रयासमा विश्लेषणात्मक खातालाई ping मात्र गर्न। खोजी स्पाम फिल्टर गर्न सकिन्छ यसैले तिनीहरूलाई एनालिटिक्स खातामा देखा पर्न रोक्न।
स्प्याम नियन्त्रणको उपाय
जे होस् स्पाम वेबसाइटहरुमा लिंक गरिएको देखिन्छ, रूसी स्पाम वास्तवमा वे वेबसाईटहरूमा संलग्न छैनन् जुन तिनीहरू देखिएका छन्। तल केहि धेरै धेरै सामान्य स्प्याम लिंकहरूको सूची छ:
धेरै जसो लिंकहरू प्रयोगकर्ताको वेबसाइटमा जान सक्दैनन् बरु गुगल एनालाइटिक्स प्रयोगकर्ताहरूको प्रयोगकर्ता आईडीको भ्रमण गर्छन्। तिनीहरूको लिंक विश्लेषणात्मक परिणामहरूमा देखा पर्दछ जसले गुगल प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको वेबसाइटहरूमा भ्रमण गर्न लोभ्याउँदछ। त्यस्ता स्पाम का उदाहरणहरू darodar र ilovevitality.com हो। जे भए पनि स्प्यामले प्रयोगकर्ताको साइट भ्रमण गर्दैन, गुगल एनालाइटिक्स परिणाममा देखा पर्न रोक्न आवश्यक छ। स्प्याम रोक्नको लागि आवश्यक कारणहरू:
i व्यक्तिहरूको साइटमा भ्रमण गर्ने व्यक्तिको स on्ख्याको बारे सही डेटा हुनु महत्त्वपूर्ण छ ताकि प्रभावकारी विश्लेषण गर्न सकियोस्। यो जानकारी बाउन्स रेट निर्धारण गर्नमा महत्त्वपूर्ण छ र स्प्यामको उपस्थितिले विश्लेषणको लागि एकत्र गरिएको डाटालाई गलत बनाउँदछ।
ii। स्प्यामको उपस्थितिले नकारात्मक रूपमा खोज इञ्जिनको श्रेणीलाई असर गर्दछ। स्प्यामरहरूको अस्तित्व जसले लगातार नयाँ प्रकारको स्प्यामहरू विकास गरिरहेको छ मिसेफिट जस्ता कम्पनीहरूको अस्तित्व आवश्यक छ जसको उपाधिसँग लड्न र साना व्यवसायको चालुलाई सहज बनाउँदछ।
रेफरल स्प्याम TL चेकलिस्ट प्रयोग गरेर लड्न सकिन्छ:
१. बोट फिल्टिbउपकरण उपकरणको "Google सेटिंग्स" मा क्लिक गरेर र "बट फिल्टरि" "विकल्प चयन गरेर Google एनालिटिक्स खातामा बोटहरू देखा पर्न रोक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
२. सबै रूसी स्प्याम यूआरएल फिल्टर फिल्टर विकल्प सहित रेफरल बहिष्करण सूचीमा तिनीहरूलाई थपेर फिल्टर गर्नुपर्दछ।
a) रेफरल स्प्याम ब्लक गर्ने मामिलामा, Google एनालिटिक्स खातामा जानुहोस् र "फिल्टर" उपकरण चयन गर्नुहोस्।
b) "नयाँ फिल्टर" विकल्प चयन गर्नुहोस् र डोमेन नाम इनपुट गर्नुहोस्।
c) फिल्टरको प्रकारमा, कस्टम विकल्प चयन गर्नुहोस् र रेफरल विकल्प चयन गर्नुहोस्।
d) सटीक URL टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईं "फिल्टर प्याटर्न" मा रोक्न चाहानुहुन्छ।
e) प्रक्रियाdमाथि उही डोमेनको लागि गर्नुपर्दछ तर "फिल्टर फाँट" विकल्पमा तपाईले होस्टनाम क्लिक गर्नुपर्नेछ।
f) उही प्रक्रिया खोजी स्प्यामको लागि मात्र लागू हुन्छ जुन "अभियान फाँट" लाई "अभियान अवधि" को साथ बदल्नु पर्दछ र ढाँचा भनेको सुहाउँदो शब्द शब्दशः हो।
However. यद्यपि यो सिफारिश गरिएको छ कि गुगललाई रिपोर्ट गरीयो यदि त्यहाँ द्वेषयुक्त कोडहरूको शंका छ भने।